सर्वनाममा 'सब ठीक छ..!' - Seto Parda
सर्वनाम नाटकघरमा नाटक ‘सब ठीक छ..!’ मञ्चन भइरहेको छ । कृष्ण खड्काको निर्देशनमा बनेको नाटक शुक्रबारदेखि मञ्चन सुरु भएको हो ।
इम्प्रोभाइजेसनबाट तयार भएको नाटकले मानसिक स्वास्थ्यलाई केन्द्रिय विषयवस्तु बनाएको छ । मानसिक समस्यासँग लडिरहेका बिरामी, उनीहरुलाई समाजले हेर्ने नजर र गर्ने व्यवहार, उनीहरुको उपचारका क्रममा देखिने जटिलता नाटकले देखाउने प्रयास गरेको छ । एउटा मानसिक अस्पताल, त्यहाँका बिरामी, मनोचिकित्सक, मनोविश्लेषक र मनोविज्ञानको विद्यार्थीको वरिपरि नाटक घुमेको छ ।
नाटकमा आशिष काफ्ले, कृष्ण खड्का, धिरज थापा मगर, मुकेश हमाल, बिन्दु बिएम, नवीन पौडेल र क्षितिज पराजुलीको अभिनय रहेको छ । इँगी होपो कोइँच सुनुवारको प्रकाश परिकल्पना रहेको नाटकमा पास्लाक्पा शेर्पाले प्रकाश परिचालन गरेका छन् । त्यस्तै रिया भारतीले नाटकमा ध्वनी परिचालन गरेकी छन् जसको संयोजन क्षितिज पराजुली र अनुपमा राईले गरेका हुन् ।
नाटक फागुन ३० गतेसम्म बिहिबार बाहेक हरेक साँझ ५ बजे मञ्चन हुनेछ । शनिबार दिउसो १ बजे नाटकको अतिरिक्त शो मञ्चन हुनेछ ।
Tags: सब ठीक छ..! सर्वनाम सर्वनाम थिएटर
Previous अन्जली र बलेकाे ‘चप्पल’
Next चैत ७ मा दयाहाङको ‘नीरफूल’